Wiil Uu Dhalay Xiddigii Hore Ee Kooxda Horseed Cafiif Oo Gool Qurux Badan Xalay Ka Dhaliyay Switzerland (Daawo Goolka) | Laacib.net
Wiil Uu Dhalay Xiddigii Hore Ee Kooxda Horseed Cafiif Oo Gool Qurux Badan Xalay Ka Dhaliyay Switzerland (Daawo Goolka)
November 15, 2018 Balaleti 0
Wiil uu dhalay xiddigii hore ee kooxda Horseed ee horyaalka Soomaaliya Cafiif oo lagu magacaabo Akram Cafiif ayaa xalay gool qurux badan waxa uu u dhaliyay xulkii Qatar kulan saaxiibtinimo oo ay 1-0 kaga badiyeen xulka Switzerland.
Akram Afif oo loo ako inuu yahay xiddiga hogaamin doona Qatar marka ay Koobka Adduunka martigelinayaan sannada 2022 ayaa gool qurxoon oo uu la maray goolhayaha waxa uu dhamaadkii ciyaarta guusha ugu dhiibay xulka Qatar.
Akram oo 21 sanno jir ku dhashay magaalada Doha ee dalka Qatar, aabihiis oo ka soo jeeda Yemen Cafiif ayaana soo maray kooxda Horseed ee horyaalka Soomaaliya halka uu sidoo kale aabihiis u soo dheelay kooxda reer Tanzania ee Simba.
Akram waxaa milkiyad ahaan iska leh kooxda reer Spain ee Villarreal laakiin waxa uu amaah ugu soo dheelay kooxaha Sporting Gijon iyo Euben isagoo haatan amaah ku jooga kooxda dalkiisa ee Al Sadd.
8dii bishii May sannadii 2016, Akram waxa uu noqday xiddigii ugu horeeyay ee Qatar u dhashay ee ka ciyaara horyaalka La Liga.
Xogtaan waxaa nala wadaagay oo aan uga mahadcelineynaa Sadik Barre
Halkaan ka daawo goolka quruxda badan ee Akram Cafiif uu ka dhaliyay Switzerland: